Wararka Maanta: Axad, Mar 31, 2013-Shirkada Xawaalada AMAANA oo deeq gaarsiisay dadka uu soo ritay cudurka shaban-biyoodka ee Baladweyne [Sawirro]
Axad, Maarso 31, 2013 (HOL) — Shirkada xawaalada AMAANA ee magaalada Baladweyne ayaa gaarsiisay dadka la ildarran cudurka shuban-biyoodka deeqdii ugu ballaarneyd marka laga soo tago kaalmadii ugu danbeysay oo ay soo gaarsiiyeen dadka bukaanka ah dowladdaha Soomaaliya iyo Jabuuti.
Deeqda shirkada AMAANA ay gaarsiisay xarunta Ceel-jaalle ee lagu daweynayo dadka bukaanka ah ayaa la oran karaa waxaa ay aheyd mid ka tarjumeysa baahida dhabta ah ee ka jirtay xarunta caafimaad sida uu u sheegay HOL maamulaha shirkada Xassan Ibraahim Xalane.
“Marka hore waxaan si madaxbanaan qiimeyn dhab ah ugu sameynay baahida ka jirta xarunta lagu daweynayo bukaanka, waxaan ogaanay in hadda daawo ilaa xad ku filan loogu deeqay, balse ay jirto baahi ay u qabaan bukaanka in ay hellaan biyo nadiif ah iyo cabitaan ugu yaraan soo celin kara jirkooda madaama uu fuuqbax jiro, si gaar ah caruurta ayaan ogaanay in baahidaas ay qabaan waxaana ku deeqnay biyo nadiif ah, cabitaan ka sameysay Saytuun, buskudka caruurta la siiyo, iyo agabka loo isticmaalo nadaafada sida Oomada iyo Saabuuta,’’ ayuu yiri Xassan Ibraahim Xalane maamulaha shirkada xawaalada AMAANA magaalada Baladweyne.
Howl-wadeenada xarunta caaafimaad ee lagu daweynayo dadka bukaanka ah ee uu soo ritay cudurka shuban-ka ayaa dhinacooda u sheegay HOL in ay baahin weyn u qabeen gargaarka noocan oo kale ah madaama ay ka jirtay xarunta dhibaato dhinaca biyaha nadiifta ah.
Cadadka deeqda maanta ay shirkada AMAANA geysay xarunta Ceel-jaalle ee dulleedka magaalada Baladweyne ayaa meesha ka saaraya baahidii bukaanku ay u qabeen in ay helleen biyo nadiif ah oo ay cabaan, waxaana ka mahad celiyay gargaarka shirkada howl-wadeenada xarunta iyo dadka bukaanka ah.
Ma’aha markii ugu horeysay oo ay shirkada deeq kala duwan gaarsiiso dadka u jiifa cudurka shuban-biyoodka, iyadoo horay u geysay gargaar kala duwan oo ay ka mid tahay dawada loo isticmaalo joojinta fuuqbaxa.